Ụzọ Isi Mee Ka Ndụ Ezinụlọ Gị Na-enye Obi Ụtọ - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
ISI NKE IRI NA ANỌ
3 Jehova kere mmadụ abụọ mbụ, bụ́ Adam na Iv, ma jikọta ha ọnụ ịbụ di na nwunye. O tinyere ha n’ebe obibi bụ́ paradaịs elu ala, nke mara mma—ogige Iden—ma gwa ha ka ha mụọ ụmụ. “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jupụta ụwa,” ka Jehova kwuru. (Jenesis 1:26-28; 2:18, 21-24) Nke a abụghị nnọọ akụkọ ifo, n’ihi na Jizọs gosiri na ihe Jenesis na-ekwu banyere otú ezinụlọ si malite bụ eziokwu. (Matiu 19:4, 5) Ọ bụ ezie na anyị na-eche ọtụtụ nsogbu ihu, ndụ adịghịkwa otú Chineke zubere ya, ka anyị hụ ihe mere inwe obi ụtọ n’ezinụlọ ga-ej4 Onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ pụrụ inye aka mee ka ndụ ezinụlọ na-enye obi ụtọ site n’iṅomi Chineke n’igosipụta ịhụnanya. (Ndị Efesọs 5:1, 2) Otú ọ dị, olee otú anyị pụrụ isi ṅomie Chineke, ebe ọ bụ na anyị apụghị ịhụ ya anya? Anyị pụrụ ịmata otú Jehova si eme ihe n’ihi na o si n’eluigwe zite Ọkpara ya n’ụwa. (Jọn 1:14, 18) Mgbe ọ nọ n’ụwa, Ọkpara a, bụ́ Jizọs Kraịst, ṅomiri Nna ya nke eluigwe nke ọma nke na ịhụ Jizọs na ige ya ntị dị nnọọ ka iso Jehova nọrọ na ige Ya ntị. (Jọn 14:9) N’ihi ya, site n’ịmụ banyere ịhụnanya Jizọs gosipụtara nakwa n’ịgbaso ihe nlereanya ya, onye ọ bụla n’ime anyị pụrụ inye aka mee ka ndụ ezinụlọ na-enye obi ụtọ karị.i kwe omume.
IHE NLEREANYA NKE NDỊ BÚ DI GA-AGBASO
5 Bible na-ekwu na ndị bụ́ di kwesịrị ịdị na-emeso nwunye ha otú ahụ Jisọs si emeso ndị na-eso ụzọ ya. Tụlee ntụziaka a Bible nyere: “Ndị bụ́ di, nọgidenụ na-ahụ nwunye unu n’anya, dị nnọọ ka Kraịst ahụ hụkwara ọgbakọ ahụ n’anya ma nyefee onwe ya maka ya…N’ụzọ dị otú a, ndị bụ́ di kwesịrị ịdị na-ahụ nwunye ha n’anya dị ka ahụ́ nke ha. Onye hụrụ nwunye ya n’anya hụrụ onwe ya n’anya, n’ihi na ọ dịghị nwoke kpọtụworo anụ ahụ́ nke ya asị; kama ọ na-azụ ma na-elezi ya anya, dị ka Kraịst ahụ na-emekwara ọgbakọ ahụ.”—Ndị Efesọs 5:23, 25-29.
13 Iji mezuo òkè nke ya, nwunye pụrụ ilekọta ezinụlọ ya n’ọtụtụ ụzọ. Dị ka ihe atụ, Bible na-egosi na ndị lụrụ di kwesịrị “ịhụ di ha n’anya, ịhụ ụmụ ha n’anya, inwe uche zuru okè, ịdị ọcha, ịbụ ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ, ndị ezi mmadụ, na-edo onwe ha n’okpuru di nke aka ha.” (Taịtọs 2:4, 5) Nwunye na nne nke na-eme omume otú a ga-abụ onye ezinụlọ ya ga-anọgide na-ahụ n’anya ma na-akwanyere ùgwù. (Ilu 31:10, 28) Otú ọ dị, ebe ọ bụ na alụmdi na nwunye bụ nkekọ nke mmadụ abụọ na-ezughị okè, ọnọdụ ndị sibigara ike ókè pụrụ ịkpata nkewa ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm. Bible kwuru na di na nwunye pụrụ ikewa n’ihi ihe ụfọdụ. Ma, nkewa abụghị obere okwu, n’ihi na Bible na-adụ ọdụ, sị: “Nwunye ekwesịghị ịhapụ di ya;…di ekwesịghịkwa ịhapụ nwunye ya.” (1 Ndị Kọrint 7:10, 11) Nanị ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru na a pụrụ iji maka ya gbaa alụkwaghịm bụ ịkwa iko nke di ma ọ bụ nwunye.—Matiu 19:9.
15 Ka ụwa a na-ajọwanye njọ, ụmụaka chọrọ ndị nne na nna ga na-echebe ha pụọ n’aka ndị na-achọ imerụ ha ahụ́, dị ka ndị na-edina ụmụaka. Tụlee otú Jizọs si chebe ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ ndị o ji ịhụnanya kpọọ “ụmụntakịrị.” Mgbe e jidere ya, gajekwa igbu ya, Jizọs mere ka ndị na-eso ụzọ ya nwee ohere ịgbalaga. (Jọn 13:33; 18:7-9) Dị ka nne ma ọ bụ nna, ọ dị mkpa ka ị mụrụ anya iji chọpụta mgbalị ndị Ekwensu na-eme imerụ ụmụ gị ahụ́. Ọ dị mkpa ka i buru ụzọ dọọ ha aka ná ntị tupu ha abanye ná nsogbu.* (1 Pita 5:8) Ha nọ nnọọ n’ihe ize ndụ ugbu a n’ụzọ anụ ahụ́, n’ụzọ ime mmụọ, nakwa n’omume karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
18 Ụmụaka hà pụrụ ịhụ ụzọ ndị ha pụrụ isi ṅomie Jizọs ma mee ka ndị mụrụ ha nwee obi ụtọ? N’eziokwu, mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ isiri ndị na-eto eto ike irubere ndị mụrụ ha isi, ma nke ahụ bụ ihe Chineke chọrọ ka ụmụaka na-eme. (Ilu 1:8; 6:20) Jizọs na-erubere Nna ya nke eluigwe isi mgbe nile, ọbụna n’ọnọdụ ndị tara akpụ. N’otu oge, mgbe ọ bụ uche Chineke ka Jizọs mee otu ihe tara nnọọ akpụ, Jizọs kwuru, sị: “Wepụ iko a [otu ihe a chọrọ ka o mee] n’ebe m nọ.” Otú ọ dị, Jizọs mere ihe Chineke kwuru, n’ihi na ọ ghọtara na Nna ya maara ihe kasị mma. (Luk 22:42) Site n’irube isi, ụmụaka ga-eme ka ndị mụrụ ha na Nna ha nke eluigwe nwee nnọọ obi ụtọ.#—Ilu 23:22-25.
* Ihe enyemaka maka ichebe ụmụaka dị n’Isi nke 32 nke akwụkwọ bụ́ Mụta Ihe Site n’Aka Onye Ozizi Ukwu Ahụ, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
# Nanị mgbe ọ ga-ezi ezi ka nwatakịrị nupụrụ ndị mụrụ ya isi bụ ma ha gwa ya ka o mee ihe megidere iwu Chineke.—Ọrụ 5:29.